विद्यार्थीको हितलाई ध्यानमा राखेर क्याम्ब्रिजले अष्ट्रेलियामा सेवा वविस्तार गरेको छ – शिशिर सिंखडा
शिशिर सिंखडा, शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा आठ वर्षदेखि सक्रिय युवा हुन् । क्याम्ब्रिज इन्ष्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका संस्थापक निर्देशक सिंखडा झापाबाट सुरु भएको क्याम्ब्रिजलाई अष्ट्रेलियासम्म पु¥याउन जोडतोडले लागेका छन् । पछिल्लो समय उच्च शिक्षाका लागि अष्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । प्राविधिक विषयको उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न अष्ट्रेलिया विश्वभरका विद्यार्थीको डेस्टिनेसन हो । […]
एसईईपछि पढ्न पाइने ‘डेन्टल हाइजिन’ राम्रो स्कोप भएको विषय हो – डा. बुद्धिमान श्रेष्ठ
डा. बुद्धिमान श्रेष्ठ अध्यक्ष कान्तिपुर डेन्टल कलेज टिचिङ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर डेन्टल हाइजिन कस्तो कोर्स हो ? डेन्टल हाइजिन खास गरी दाँत र मुख सम्बन्धि विभिन्न जानकारी प्रदान गर्ने कोर्स हो । दाँतको उपचारसँग सम्बन्धित यो कोर्सलाई सर्टिफिकेट इन डेन्टल साइन्स अन्तर्गत डेन्टल हाइजिनक भनिन्छ । डेन्टल हाइजिनक कोर्स दाँतसँग मात्रै सम्बन्धित नभइ आर्टसँग […]
हरिकृष्ण श्रेष्ठ अध्यक्ष काठमाडांै प्याब्सन नुतन संस्कारयुक्त शिक्षा भनेको के हो ? नुतन भनेको नयाँ खोज हो । बालबालिका के चाहन्छन् उनीहरुको मनोविज्ञान बुझेर, जस्तो चाहन्छन् सोही ढंगबाट अध्यापन गराउने पद्धति नै नुतन संस्कारयुक्त पद्धति हो । यो पद्धतिमा शिक्षकले विद्यार्थीको व्यवहार, इच्छा, चाहनलाई स्वीकार गरी सोही अनुरुप पठनपाठन गराइन्छ । विद्यार्थीहरु जुन तरिकाबाट सिक्न र बुझ्न […]
टीकाराम पुरी उम्मेदवार, अध्यक्ष, प्याब्सन महाधिवेशनको तयारी कस्तो हुँदैछ ? हामी महाधिवेशनको अन्तिम तयारीमा छौं । नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि एकातर्फ सर्वसम्मत नेतृत्वका प्रयत्न छ भने अर्कोतर्फ निर्वाचनको तयारी पनि छ । अहिलेको व्यवसायिक संक्रमणकालिन अवस्थामा सर्वसम्मत रुपमा जान सकिन्छ भन्ने सोच हो । अहिले संघीय शिक्षा ऐन पनि बन्दैछ भने सँगसँगै शिक्षा नियमावली बन्छ र प्रदेश […]
डी. के. ढुंगाना उम्मेदवार, अध्यक्ष, प्याब्सन शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कसरी मूल्यांकन गर्नु भएको छ ? शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी ५ सय अर्बभन्दा बढी भइसकेको छ । २ लाख शिक्षक तथा कर्मचारी छन् । २४ लाख विद्यार्थी आवद्ध छन् । निजी विद्यालयले शिक्षाको गुणस्तरमा सहयोग पु¥याएको छ । यती ठूलो लगानी र योगदान हुँदाहुँदै पनि सरकारले निजी […]
राजेन्द्र बानियाँ, उम्मेदवार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्याब्सन प्याब्सनको १४ औं महाधिवेशको तयारी कस्तो छ ? हामीले १४ औं महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेका छौं । २७ गते उम्मेदवारी दर्ता हुन्छ । २८ र २९ गते महाधिवेशन चल्नेछ । जसमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले उद्घाटन गर्नुहुनेछ । यसका लागि हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढेका छौं । र यसलाई सफल बनाउनका लागि प्रयासरत छौं । […]
प्याब्सनलाई सांगठनिक रुपमा बलियो बनाउनेछु – इश्वरबहादुर गुरूङ
ईश्वर बहादुर गुरुङ उम्मेदवार, महासचिव केन्द्रीय प्याब्सन महाधिवेशनको तयारी कस्तो चलिरहेको छ ? हामी १४ औं केन्द्रीय महाधिवेशनको तयारीमा छौं । पछिल्लो समय शिक्षामा देखिएका नीतिगत समस्याहरु, जुन केन्द्रीय स्तरमा प्रदेश स्तरमा र स्थानीय स्तरमा देखिएका छन् । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा महाधिवेश हुँदैछ । यसैले महाधिवेशन यो अर्थमा पनि महत्वपूर्ण छ । महाधिवेशन पनि यसैमा केन्द्रित हुने मैले […]
पहिले सुझाव दिने र लविङ गर्ने भएन भने सडक आन्दोलन गर्नैपर्छ
कुमार घिमिरे उम्मेदवार, उपमहासचिव, प्याब्सन निजी क्षेत्रका चूनौतीलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? निजी क्षेत्रका चूनौती भनेकै प्याब्सनका चुनौती हुन । जो नेतृत्वमा आए पनि त्यो काम गर्नैपर्ने हुन्छ । पहिलो कुरा ४५ प्रतिशत छात्रृत्तिको विषय छ । यो अदालतमा पनि मुद्धा चलिरहेको छ । सरकारले दिने छात्रवृत्तिमा विभेद भयो । यदि निजीमा पढेकालाई पनि […]
प्याब्सनमा क्षमता र पहुँच भएको नेतृत्व चाहिन्छ
गोपाल आचार्य उम्मेदवार, उपाध्यक्ष प्याब्सन महाधिवेशनको तयारी कस्तो हुँदैछ ? हामी प्याब्सनको महाधिवेशनको अन्तिम तयारीमा छौं । महाधिवेशनमा दुई पक्ष भएको हुँदा सर्वसम्मत मै जानु पर्छ भन्ने खालका कुराहरु आएका छन् । यसका लागि हामी अहिलेसम्म प्रयासरत छौं । २९ गते चुनाव हुने भएकाले २७ गतेसम्म सर्वसम्मत गर्न सकिन्छ । महाधिवेशन हुँदै गर्दा प्याब्सनमा राजनीति […]
प्याब्सनलाइ आर्थिक रुपमा बलियो बनाउछु – गणेश पोख्रेल
गणेश बाबु पोखरेल उम्मेदवार,सह कोषाध्क्ष प्याब्सन महाधिवेशलाई कसरी नियाल्नु भएको छ ? प्रत्येक दुई दुई वर्षमा संगठनको विधान अनुसार महाधिवेशन हुने गर्दछ । नयाँ संरचना बनिसके पछि तीन तहको (स्थानिय, प्रदेश र जिल्ला) अधिवेशनहरु सकेर केन्द्रको लागि तयारी गर्दै छौं । महाधिवेशनका लागि सबै क्षेत्रबाट प्रतिनिधिहरु आउने क्रम पनि जारी छ । अहिलेको नयाँ […]